लकडाउनमा लुकेर पो’र्न हेर्नुहुन्छ ? होसियार, यस्तो असर पर्ला ! - PARIJATMEDIA
कोरोना र लकडाउनका कारण मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य छन् । घरमा मानिसहरूको भरपर्दो साथी भनेको मोबाइल हो । मोबाइलमा पनि मनिसहरू अत्याधिक हेर्ने भनेको पो-र्न हो । यो कुरा बिभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
मोबाइलको विकाससँगै मानिसहरुले मनोरञ्जका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालेका छन् । त्यसमा मुख्य भनेको पो-र्न हो । यदि तपाई अनलाइनमा लुकेर पो-र्न हेर्नुहुन्छ र तपाईमा पो-र्न हेर्ने बानी नै बसिसकेको छ भने त्यो अवश्य पनि राम्रो बानी होइन । यतिबेला लकडाउन छ अनि धेरैजसो मानिसहरुसँग स्मार्ट फोन छ । त्यस्तै पो-र्न साइटहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा छन् । त्यसैले मनिसहरू पो-र्न नहेर्ने कुरै भएन ।
अब पो-र्न हेर्नुको बेफाइदाबारे चर्चा गरौं ।
यदि स्मार्ट फोनमा डाटा सस्तो हुने हो भने सबैभन्दा बढी डाटा मानिसहरुले पो-र्न हेरेर सक्ने एक अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।
स्मार्ट फोनमा पो-र्न हेर्दा मनोरञ्जन त अवश्य मिल्ला तर यसले मनोरञ्जका साथै धेरै हा-नी समेत पुर्‍याउँछ । मोबाइलमा पो-र्न हेर्न सजिलो छ । तर, वर्तमान अवस्थामा मोबाइलमा पो-र्न हेर्नु महंगो समेत छ ।
पो-र्न हेर्नेहरुलाई डि-प्रेशनले सताउने गरेको अनुसन्धानले समेत देखाइसकेको छ । उनीहरुले एक्लोपनलाई साथी बनाउने हुँदा डि-प्रेशनको सि-कार हुने गरेको बताइएको छ ।
यौ-न व्यक्तिगत विषय भएपनि यसले पारिवारिक क-लह निम्त्याउन सक्छ । पो-र्न हेर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यले देख्ने हुँदा यसले स’मस्या बनाउन सक्छ ।
अत्याधिक पो-र्न हेर्नेहरुको ध्यान ह-स्तमैथु-नमा जाने शोधले समेत देखाइसकेको छ । उनीहरुमा ह-स्तमै-थुन गर्ने बानीको विकास हुने र यौ-न क्रि-याकलापमा समेत ह्रास आउने बताइएको छ ।
अपेक्षा गरिएको र वास्तविकतामा फरक पाएपछि पो-र्न हेर्नेहरुमा यौ-न रोग देखा पर्न सक्छ । यसले अनावश्यक कौतुहलता सिर्जना गरेर विभिन्न भ्र-महरु समेत उत्पन्न गराउँछ ।
यो पनि- रसिलो याै’न जीवन कसिलो सम्वन्धः हरेकले जान्नैपर्ने १० टिप्स !
-यौ’नस-म्पर्कका बेला हरेक कुरालाई ग-म्भीर रूपले लिने गल्ती नगर्नुहोस्
-स’म्भोगका बेला जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर स-म्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर नगर्नुहोस् ।
-स’म्भोगका विषयमा तपाईंं वा जोडीको मनमा केही शंका भएमा पहिले त्यसलाई हटाउनुहोस् र मात्र सम्भो’गको सिलसिला अघि बढाउनुहोस् ।
-यौ’नजी-वनको पर्याप्त आनन्द लिनका लागि तपाईंं शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ ।
-स’म्भोगलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
-सम्भो’गका दौरान जोडीको स-न्तुष्टिको ख्याल गर्नुहोस् ।
-पाक-क्रियालाइ बढी भन्दा बढी जोड दिनहोस् ।
-स’म्भोगका बेला कम बोल्नुहोस् र आफ्नो जोडीका कुरा पनि सुन्नुहोस् ।
-सम्भोगका बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला ।
-सम्भो’गका बेला एक–अर्कामा शारी-रिक एवं मानसि’क रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
Posted in स्वस्थ
Prevकसिलो सम्वन्धः हरेकले जान्नैपर्ने १० टिप्स !
nextवि.सं.२०७७ साल जेठ ११ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० मे २४ तारिखको राशिफल